အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: စိ မ်းလ န်းေ သာက မ္ဘာ- 1
စိ မ်းလ န်းေ သာက မ္ဘာ- 1
တိုးတက်မှုတစ်ခုနှင့်အတူ မြို့ကြီးများ ချဲ့ကားလာကြသည်။ လမ်း၊ တံတားများ ခုံးမောက်တက်လာသည်။ ရထားလမ်းတစ်ချို့ မြေကြီးအောက်အတွင်း တိုးဝင်သွားသည်။ Double Layer မြို့တော်ကြီးများသည် ၂၀ ရာစုနှစ်တွင် အများအပြား ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ လိုက်ပါ မလာသည်ကတော့ စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာပင်ဖြစ်မည်။ နည်းပညာနှင့် လူသားတို့ကြောင့် သဘာဝ ၀န်းကျင်သည် ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သကဲ့သို့ အသစ်ပြန်လည် မွေးဖွားနိုင်စွမ်းလည်း ရှိပါသည်။ ၂၁ ရာစုနှစ်တွင် ဖန်တီးလာသော လူမှုဝန်းကျင်တွင် စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာသည် အသွင်ပြောင်း ရောက်ရှိလာမည်လား။
"မုလေးရုံ တောအစ၊ ဒေါနလမ်း မြေညီ၊ လျှောကျစမ်း ရေသင်းကြည်တယ်၊ ရွှေနှင်းဆီ ကန်ချောင်း။ " အတိတ်တစ်နေရာမှ စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာကို လေးမောင့်စံကျောင်း ကဗျာတွင် ပြန်လိုက်ရှာမိသည်။ ၀ပ်ဝပ်ပြားပြား ပန်းရုံလေးများနှင့်အတူ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်း သစ်ပင်ကြီးများနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်သည် အတွေးထဲ သာသာယာယာ ရှိနေတော့သည်။ တောင်တောရယ် သာယာပါသည်။ ပန်းမာလာများ ပွင့်ဖူးပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ မြို့ပြစရိုက် အတွင်းသို့ ထိုသဘာဝကို ခေါ်သွင်း၍တော့ မရနိုင်။ တောရိပ် တောင်ရိပ်နှင့် နေလိုလျှင်တော့ တောတောင် ၀န်းကျင်သို့ သွားနိုင်ပါမှ၊ နေနိုင်ပါမှ။ ထိုအလှကို မူဝါဒပြောင်း၍ ခံစား၍တော့ ရနိုင်ပါသည်။ ပန်းစံပယ် နန်းလယ် မပေါ်ထွက်လာလျှင် ခံပွင့်တို့သည်လည်း ရနံ့ပေးနိုင်ပါသည်လေ။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့မြင်လာရသော Green Roof များ၊ Rooftop Garden များ နှင့် Green Wall များသည် သဘာဝတရားကို ခံပွင့် ခံပန်းလေးများအသွင် ပြောင်းလဲ ဖန်တီးထားခြင်းသည်လား။ လူနေအိမ်များအတွင်းသို့ စိမ်းလန်းသောအပင်များ ပေါင်းစပ် ဖန်တီးလာခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ နှလုံးအိမ်ကို မည်၍မည်မျှ ရိုက်ခတ်နိုင်ပါသနည်း။ Green Wall ၊ Rooftop Garden များ နှင့် Green Roof များ၏ စိမ်းလန်းမှုသည် ကျွန်တော်တို့နှင့် တစ်သားတည်း နရီစည်းချက် ညီလာပြီလား။
Green Roof Buildings အချို့
စင်စစ် Green Roof များသည် 1960 ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အနောက်ဥရောပ၊ အထူးသဖြင့် Germany နှင့် Swizerland မှ အစပြု၍ ထွန်းကားလာသော နည်းပညာဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အမိုးပြင် မြက်ခင်းများ ဖြစ်သည်။ မကြာသေးသော 2000 ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် North America, Toronto, Portland, Chicago နှင့် Janpan များမှတဆင့် လူသိများ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ Green Roof များသည် အိမ်များ၏ အမိုးပြင်မျက်နှာကို ကာကွယ်ပေးသော အလွှာတစ်ခုအဖြစ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့တည်၍ ဆန်းသစ်သော နည်းပညာတို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ လူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ မြေပြင် မြက်ခင်းပြင်များကဲ့သို့ ထုနှင့်ထည်နှင့် ရပ်တည်ထားနိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် Green Roofs များအတွက် အပင် ရွေးချယ်ရာတွင် သော်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုး ပျိုးထောင်ရာတွင် သော်လည်းကောင်း ပေါ့ပါးပြီး ပါးလွှာသော ထုထည်များဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးရသည်။ ပြန်လည် ပြုပြင်ရာတွင်လည်း အကုန်အကျ နည်းပါးစေရန်နှင့် လုပ်ဆောင်ရ ၀န်ကျယ်မှု မရှိစေရန် ကြိုတင် တွက်ချက်ပြီးမှ ဖန်တီးပေးရသည်။
Typical Cross Section of Green Roof System
ယေဘူယျအားဖြင့် Green Roof ဟု ခေါ်ဆိုလိုက်သောလည်း ထို Green Roof တွင် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းနှင့် မတူညီသော ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုများစွာသည် ကွဲပြား ဖြစ်တည်လျက် ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Eco-roof ဟုခေါ်သော Vegetated Roof System သည် သမရိုးကျ အဆောက်အဦးများ၏ အမိုးပြင်တွင် တွေ့ရတတ်သည်။ အမိုးပြင်တွင် ရေတားလွှာတစ်ခုနှင့် မြောင်းများဖွဲ့စည်း၍ မြေဆီ မြေသြဇာများ ပံ့ပိုးကာ Landscape လေးတစ်ခု ဖန်တီးထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ တည်ရှိရာနေရာ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ရာသီဥတု၊ မြေဆီလွှာအရည်အသွေး၊ အပင်အမျိုးအစားနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် မူတည်၍ Eco-roof လေးများသည် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသွားတတ်သည်။ Eco-roof လေးများ ဖန်တီးထားခြင်းကြောင့် အိမ်အမိုးထည်၏ သက်တမ်းကို ပိုမို ကြာမြင့်စေရုံမကပဲ မိုးရေမှလာသော ရေဆိုးများကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အေးမြစေခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး လေထုအားလည်း သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်စေပါသည်။ United Kingdom (UK) တွင်တော့ Green Roof များအား သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေသော အမိုးပြင် (Living Roof) ဟု သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ Germany တွင်တော့ “Extensive Green Roof or Intensive Green Roof” ဟု သုံးနှုန်းလေ့ရှိသည်။
Rooftop Garden လေး တစ်ခု
မတူညီသော Green Roof တစ်မျိုးမှာ Rooftop Garden များဖြစ်သည်။ အမိုးထည် မြက်ခင်းပြင်အဖြစ် မဟုတ်တော့ပဲ မြေပြင်ပေါ်ရှိ ပန်းခြံငယ်လေးများကို အမိုးပြင်ပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ပန်းခြံငယ်လေး ဖြစ်လာသည့် အားလျှော်စွာ စိုက်ပျိုးထားသော အပင်များသည်လည်း ကွဲပြားလာသည်။ ထို Rooftop Garden များသည် အဆောက်အဦးတစ်ခု အပေါ်သို့ ကျရောက်လာသော အပူကို စုပ်ယူပေးထားခြင်းကြောင့် မြို့ပြအိမ်ရာ စီမံကိန်းများတွင် Rooftop Garden များကို အပူဒဏ် ကာကွယ်လိုခြင်းနှင့် မြို့ပြတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော လေထုညစ်ညမ်းစေသည့် မြူမီးခိုးများအား လျော့ချစေလိုခြင်း အကျိုးငှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြသည်။ Rooftop Garden များတွင် အပင်များကို Container များနှင့် စိုက်ပျိုးထားသောကြောင့် အမိုးထည်အတွက် Waterproof ဖြစ်စေရန် ဂရုပြုရသည်။ ထို့အပြင် အနားယူ အပန်းဖြေရန်နေရာများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် နေရာများ၊ ကလေးကစားသော နေရာငယ်များနှင့်အတူ ရေကူးကန်များ၊ အစားအသောက် ရောင်းချသော နေရာများ၊ သုံးဆောင်သော နေရာများလည်း ပါဝင်လာသည်။ ထို Rooftop Garden များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည်လည်း ပိုမို၍ အသေးစိတ်ကျလာသည်။ Rooftop Garden များ ပါဝင်လာသော အဆောက်အဦးများတွင် နေထိုင်သူများသည် သဘာဝအလှအပနှင့် ပိုမို ထိတွေ့ခွင့် ရလာသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အပံ့ ပိုမို ရရှိလာကြသည်။
Green Wall Building များ
အမိုးထည် မြက်ခင်းနှင့် ဥယျာဉ်ပန်းခြံများအပြင် စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သော အသွင်ပုံစံတစ်ခုမှာ Green Wall များဖြစ်သည်။ Green Wall များသည် အဆောက်အဦး နံရံများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ သီးခြား free-standing wall များအဖြစ်သော်လည်းကောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ပန်းပင်၊ နွယ်ပင်များဖြင့် နံရံအား တွယ်ကပ်၍ ဖုံးအုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အပင်အောက်ခြေတွင် မြေဆီသြဇာတို့ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အခြား နည်းပညာ တို့ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပန်းပင်နွယ်ရုံများအား ရှင်သန်စေသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း Green Wall များအား Living Wall, Bio Wall or Vertical Garden ဟူ၍ ဖွင့်ဆိုတတ်ကြသည်။
သမိုင်းသည် တစ်ပတ်ပြန်လည်တတ်သော သဘောရှိသည်ဟု ဆိုကြသည်။ အတိတ်တစ်နေရာမှ စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာကို Green Roof များ၊ Rooftop Garden များ၊ Green Wall များနှင့် အစားထိုးလာကြသည်။ ထို့အတွက် သမိုင်းတွင်ခဲ့သော ဘေဘီလုံ ဥယျာဉ်ကြီးများ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာဦးမည်လား။ မွေးရပ်မြေ ပါရှားကိုလွမ်းသော မိဖုရားအတွက် ဘုရင် Nebuchadnezzar II တည်ဆောက်ပေးခဲ့သော ဘေဘီလုံ ဥယျာဉ်သည် ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်များအတွင်းတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ပင် ဖြစ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်ပါလား။ တကယ်တော့ Green Roof များ၊ Rooftop Garden များ၊ Green Wall သည် ဘုရင် Nebuchadnezzar II တည်ဆောက်ခဲ့သော ဘေဘီလုံ ဥယျာဉ်ကဲ့သို့ ခမ်းနားထည်ဝါစရာမလို။ ကျွန်တော်တို့အတွေး၊ ကျွန်တော်တို့ ခံစားမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားသည် တစ်သားတည်း ကျနေဖို့သာလိုမည်ထင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ နှင့် စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာ
Green Roof များ၊ Green Wall များနှင့် Rooftop Garden များသည် ကနဦး တည်ဆောက်ခါစတွင် ကုန်ကျစရိတ် များကောင်း များပါမည်။ ထို့အပြင် အဆောက်အဦး ခိုင်ခံ့မှုအပေါ် တွက်ချက်ရာတွင်လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးရသော အချက်များ ပိုမို များပြားလာပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် ငလျင်ဒဏ် ခံရလေ့ရှိသော နေရာများအတွက် အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် များပြားနေမည့် Own Weight အတွက် ပိုမို၍ သတိထား တွက်ချက်ရပေမည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် Waterproofing System များနှင့် အခြား Environmental Effect များကိုလည်း ဂရုပြုရပေဦးမည်။ ရုက္ခဗေဒ ပညာရှင်များ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာများကတော့ ပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်သော လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
"ပန်းသော်က တံတိုင်းကာသည် ၊ ဇီဇ၀ါ မုခ်ခြားလို့၊ တံခါးက ချရားကြိုင်၊ သင်းတဲ့ဂနိုင်။" ၀န်းကျင်သည် ပန်းတံတိုင်းလည်း မရှိထားပါ။ တောမြိုင်ဂနိုင်လည်း မရှိထားပါ။ သို့ပေမယ့် နည်းပညာလမ်းတစ်ချို့မှာ ဖန်တီးသူတို့က ပန်းတစ်ချို့ ကောက်လာပါသည်။ ရွှေနှင့် ယိုးမှားလောက်သော ပန်းစကားပွင့်များတော့ မဟုတ်။ တော်ဝင်နန်းထိုက်သည့် ရွှေသဇင်တို့တော့ မဟုတ်။ “ပန်းစံပယ် နန်းလယ် မပေါ်ခိုက်တာမို့ အလိုက်တော် တန်သင့်ရုံပ ခံပွင့်ကို ကုံး”။ သို့ဆိုလျှင် အမိုးထည် မြက်ခင်းများနှင့် အစိမ်းရောင် နံရံများသည် ခံပွင့်များ ဖြစ်လာသည်လား။ တစ်ချိန် ထို ခံပွင့်လေးများသည်လည်း ပန်းစံပယ်လို နန်းထိုက်လာမည်လား။ သို့တည်းမဟုတ် နန်းရဝေ မန်းမြေမှာ စံပယ်လှိုင်တော့ ခံပန်းခိုင်တို့ ရွှေ့ပြောင်းခံရမည်လား။
သင် ခံစားလိုက်သည့် ရနံ့နှင့် ကျွန်တော် ခံစားမိသည့် ရနံ့တော့ ကွာခြားသွားပါမည်။ စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာကို ချစ်တတ်လျှင်တော့ အတွေးမတူလည်း လမ်းတူပါလိမ့်မည်။ ။
A Selection of Plants for Green Roofs in Singapore by Tan Puay Yok & Angelia Sia.
[စကားချပ် ။ ။ 16 January 2010 တွင် ကျရောက်မည့် MTZO မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် ဘာပေးရမလဲ စဉ်းစားနေတာ ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော့်မွေးနေ့တုန်းက သူက စူပါ အာလူးသီးကြီး (Super Potato Concept) ကို ပေးတော့ သူ့ကို အာလူးသေးသေးလေး ပြန်ပေးဖို့ လိုက်ရှာပါသေးတယ်။ ခက်တာက ရှာမတွေ့ဖူး..။ ဒါနဲ့ပဲ အာလူးသီးထက် ပိုကြီးတဲ့ စိမ်းလန်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပဲ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Green MTZO ဖြစ်သွားတာပေါ့ :P လက်ရှိ workdone က 50% ပဲ ပြီးတဲ့အတွက် စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာ -၁ ကိုပဲ မွေးနေ့အကြို လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာ -2 ကိုလည်း မကြာခင် လက်ဆောင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါဦးမယ်…။ coming soon, I will present. It is sure :P]
Posted by ဂျွန်မိုးအိမ် Labels: လက်ဆောင်, အိမ်ကလေးများနှင့် စကားပြောခြင်း
ရေးထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲး) မွေးနေ့ရှင်တော့ မသိဘူး ကိုယ်တော့ သဘောကျသွားတယ် ..း))
ကိုယ်လဲ Grean wall Green Roof တွေ သဘောကျတယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုစေရုံမက ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ချမ်းသာတယ်.. အေးချမ်းတယ်.. ကိုယ့်အိမ်လေးကိုလဲ အပူဒဏ်ကနေကာကွယ်ပေးတယ်.. ဘယ်လောက် ကောင်းကျိုးတွေ များသလဲနော်.. ကိုယ်အိမ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးဖြစ်ရင် အိမ်ထဲမှာ ဥယျာဉ်သေးသေးလေးတော့ မပါမဖြစ် ထည့်ရလိမ့်မယ်..
ကျေး​ဇူး.....ေ​မွးေ​န့​​ကိတ်အြ​ပ​င် အာကာသ​ယ​ဥ် အတွ​င်း​ဒီ​ဇို​င်း​ပါ လ​က်ေ​ဆာ​င်ြ​ပ​န်ေ​ပး​လို​က်ြ​ပီေ​နာ်။ ..... :)
မချော landscape design လုပ်ချင်ရင် mtzo ကို အပူကပ်။
သူက green specialist :P